မြားများ: ချစ်မြတ်နိုးခဲ့ရသော မိန်းမတယောက်၏ အခြားတဘက်
အိပ်ယာဝင် နောက်ကျလေ့ရှိသော မိမိအတွက် မောင်ရေ ညဉ့်နက်နေပြီ အိပ်တော့လေ ဟု ပြောမည့် တစုံယောက်သည် ကျွန်တော့်ဘဝတွင် ဘယ်တုန်းကမျှ မရှိခဲ့ပါ..။ခါတိုင်း ညဉ့်ဦးယံ အချိန်တွင် ဖုန်းဆက်၍ သတိပေးလေ့ရှိသော မိန်းမတယောက်ကတော့ ကျွန်တော် မဟုတ်သော အခြားတယောက်နှုင့် အိမ်ထောင်ပြုသွားသည်မှာ လအနည်းငယ် ကြာခဲ့ပြီ..။ ဘဝတွင် မိန်းမတယောက်အတွက် လိုအပ်သော (ထိုမိန်းမက
တော့ လိုအပ်သည် ထင်သည်။)အလှပြင်ပစ္စည်း အမျိုးနှစ်ဆယ်ကျော်ကို လောက်ငှစွာ တမျိုးပြီး တမျိုး လက်ဆောင်
ဝယ်မပေးနိုင်ခဲ့သော အဖြစ်အတွက် မိမိ ဘယ်သောအခါမှ ဝမ်းနည်းနေလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ.။
ငယ်ငယ်က ကျောင်းအတူတူသွားခဲ့သော မီနီစကတ် ဝတ်ထားသော ဆံပင်တိုနံ့နံ့နှင့် ကောင်မလေး တယောက်သည်
ယခုအချိန်ထိ မီနီစကတ်ကို စွဲစွဲမြဲမြဲ ဝတ်လေ့ရှိပြီး..ပင်ဆယ်လ်ဟီး
ဒေါက်ဖိနပ်ကိုပါ တွဲပြီး စီးလေ့ရှိသော အလေ့အထ ကို ဘယ်အချိန်ကတည်းက စွဲလမ်းခဲ့သလဲ ကျွန်တော် မမှတ်မိတော့ပြီ..။ ယခုဆိုလျှင် တပတ်တခါ ဆံပင် ကောက်လိုက် ဖြောင့်လိုက် လုပ်သော အလေ့ ရှိပြီ..။ ကွန်ပျူတာဗေဒကိုတတ်.။အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကားတတ်.။ဆိုင်ကယ်စီးတတ်.။ ရည်းစားအပေါ် စိတ်ကောက်တတ်တဲ့ ကောင်မလေးဟာ..ခုတော့ ခေတ်မီ မြို့ပြနိုင်ငံ တခုမှာ အိပ်မက်တွေကို တရစပ် တူးဖော်ရင်း..ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်နေပေပြီ..။
အဝေးက သူမနှင့် အတူ ရှိခဲ့ဖူးသော နေ့ရက်များကို တခါတခါ သတိရမိသောအခါ နာကျင်မိရုံမှ တပါး..အခြားခံစားမှု ထိထိရှရှ မဖြစ်တော့သည်မှာ. ကျွန်တော့်တွင် အချစ်တခု သေဆုံးသွားသောကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်.။သို့မဟုတ်.သူမနှင့် ပတ်သတ်၍ နှစ်သိမ့်စရာ ရှာဖွေမတွေ့နိုင်သောကြောင့်သာ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်.။
လွန်ခဲ့သော နှစ်အနည်းငယ်က သူမ ပြောခဲ့သော စကားများကို တထစ်ချ ယုံကြည်ခဲ့မိသော မိမိသာ ညံ့ဖျင်းလွန်းရာကျခဲ့ပါသည်.။
အညတြ ဘဝဖြင့်သာ လောကကို ဖြတ်သန်းသွားချင်ခဲ့သော မိမိကို သူမ ဘယ်တုန်းကမှ အားမရခဲ့ပါ.။ ထိုအတွက်ကြောင့်သာ သူမ၏ အနာဂတ် ဘဝ၏ မျှော်လင့်ချက်များတွင် ကျွန်တော့်ကို ထည့်သွင်းမတွက်ချက်ခဲ့ခြင်း
ဖြစ်ပါလိမ့်မည်.။ ကျွန်တော် သူမကို စိတ်မဆိုးခဲ့ပါ.။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာ အပြစ်တင်ခဲ့မိပါသည်။ မိန်းမတယောက်၏
လိုအပ်ချက်များတွင် ငွေကြေးနှင့် အခြား ဂုဏ်သရေရှိ ပကာသနများ ရောယှက်နေခဲ့သည်ကို မေ့လျော့ ပစ်ခဲ့သော
ကျွန်တော်သာလျှင် ထိုမိန်းမနှင့် မထိုက်တန်မှန်း(မအပ်စပ်မှန်း) သဘောပေါက်လာခဲ့ပါသည်။
ယခုအခါ သူမပျော်ရွှင် နေလိမ့်မည်ဟု ယူဆပါသည်။ ကျွန်တော်လည်း ပျော်ရွှင်ရပါသည်.။ဘဝတွင် မိန်းမတယောက်နှင့်ပတ်သတ်၍ ဤကဲ့သို့သော အဖြစ်အပျက်များ.နောက်တကြိမ် ကျွန်တော် မတောင်းဆို (မရင်ဆိုင်)ချင်တော့ပါ.။ မိန်းမယောက်သည် မိန်းမကဲ့သို့ တောင်းဆိုနေဦးမည်သာ ဖြစ်ပါသည်.။ တယောက်တည်း
နေထိုင် ရှင်သန်ရဲသော ဘဝကို ကျွန်တော် အချိုးကျစွာ နေထိုင်ရင်း.. ကိုယ်ပိုင် အိပ်မက်များ၏ အဆုံးစွန်ထိ လျှောက်လှမ်းဖို့..လက်တွဲဖော် ဆိုသော စကားလုံးကို ကျွန်တော် ဘယ်တော့မှ မရေရွတ်မိစေဖို့. ကျွန်တော်၏ ဖြေဆည်ရာကို ရှာဖွေ နေဆဲသာ ဖြစ်ပါသည်..း။